Faysal iyo Fudfudeedkiisa
Hadaan ka hadlo sababta igu kaliftay inaan soo gudbiyo fikradeeydan waxa weeyey qoraal aan ku arkay shabkadaha Internetka oo uu qoray ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe oo aan aniga u maleenayo in uu xoogaa ku fududaaday siyaasada iyo qabiilaysiga , waxaa uu ka hadalay C/lahi Yusuf iyo Majeerteen iyo Darood oo midba si gaar ah uga hadlay isagoo uga dan leh in uu iska horkeeno Hawiye iyo dadkaas aan idiin soo shegay .
waxaan leeyaahay wiilakan yar ee fudud , hadaad siyaasi taahay sidaas uma hadasheen ee intaas waad dhaami lehed lakiin wax uurkaga ku jiray oo ah cadawad iyo xumaan aad u qabtid beel weynta daarood ayaa ilahay kaa soo saaray oo ad ku hayn weday laabtaada .
sida lawada ogsoon yaahay xukuumadii siyaad bare waxaa ku kacay soomali oo dhan iyagoo ka sheeganayay wax qabad la'aan haba ugu horeeyeen daaroodka oo uu hor kacayay majeerteenka , ka hor imanshaha ayka horyimadeen daroodka xukuumadaas waxeey ku tusaaysa in aysan aheen xukumad ka turjumeysaa daaroodnimo balse ay eheed xukuumad kaligii talis ah ,maxaa yeelay Siyad Bare sida lawad ogyahay waxba uma qaban beshiisa mareexaan iska daayee darood , waxa kaliya uu qabtay waxa weeye wadankii oo dhan in uu ka dhigay muqdisho kaliya taasna ay keentay in soomalidii kale ee an eheen reer muqdhisho kala horyinadaan diidmo iyo mucaaradnimo
waxaanab la yaabay markii uu ku sigtayba in uu ogaadeen ka saaro soomaliya oo yiri waxeey wateen fikar ah in ay ogaaadenka ka saaraan qoxootinimada iyo dhulkooda yar ee keenta iyo hodka ah .
waxaas iyo waxyaabo badan oo uu meesha ku qoray oo aysan ila eheen qof siyaasi sheganayo in uu ku hadlo isagoo marmarka qaar aad arkeyso meel uu sileeyahay ku kici qabiilka hawiyaha aad arkeyso in uu yasayo iyaga oo ka dhigayo waxba yahayeey .
waxaan kaloo la yaabay waxa uu rabaa in uu ku doodo somaliland waa qabiilo isku tagay oo uu yiraahdo waxaa ka mida ah beelaha DHulbahante iyo Warsangali oo ah Daaroodka uu wax ka sheegayo marka sideey isku qabaneeysaa labadaa arimood in uu daarod wax ka sheego DHulbahante iyo Wawrssangalina yiraarhdo waa somaliland , marak waxaan u maleenayaa iyaga ugumaba jiraan tirada Daarood .
marka oday wakaa xumaatay arinta rabtay ee eheed inad Daarood ugu soogabato c/lahi yusuf ama Majerrtenka ee waxa uurkaaga ku jiro waxaa fiican in aad iska qarsato oo aadan dadkakula dhex wareegin hadaad ka xuntahay c/lahi yusuf guusga uu gaaray waa mid ay soomali oo dhan u ogashahay iyagaana u doortay marka dadkaa waaya aragsan kaana il baxsan ee iska seexoo waxaadba ka badin la'dahay hebal baa sidaa yiri iyo hebal baa xagan kasoo socda .